युवा–विद्यार्थीको मोबाइल सन्देशपछि सांसद्हरुले भने– ‘संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दिदैंनौँ’ « Pahilo News
युवा–विद्यार्थीको मोबाइल सन्देशपछि सांसद्हरुले भने– ‘संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दिदैंनौँ’
प्रकाशित मिति : 15 December, 2016 2:24 pm
३० मंसिर । नेकपा (एमाले) का भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपाल, अनेरास्ववियुलगायत अन्य युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरुले सामूहिक रुपमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसद्लाई ‘माननीय होसियार, जनताको अपेक्षा छ राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधेयक खारेज होस्’ भनी मोबाइलमा सन्देश लेखेर पठाएका छन् । उनीहरुले पठाएको सन्देश केही सांसद्ले प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया दिए भने केहीले प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
तर, सो सन्देशका बारेमा जानकारी राख्दा सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका सांसद्ले समेत स्वागत गरे । युवा–विद्यार्थी परिवर्तनको संवाहक भएको भन्दै त्यस्तो दबाबले आफूहरुलाई राष्ट्रहितमा काम गर्न अझ उत्प्रेरणा मिलेको प्रतिक्रिया दिए । मोबाइलमा सन्देशबारे पहिलो न्युज डटकमसँग कुन सांसद्ले के भने ? उनीहरुकै शब्दमाः
मैले उहाँहरुले पठाएको सन्देश अहिलेसम्म प्राप्त गरेको छैन । सायद बाटामा आउँदै होला । तर, उहाँहरुले जुन ढंगले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव गलत छ भन्दै सांसद्हरुलाई खबरदारी गर्ने काम गर्नुभएको छ, म त्यसको स्वागत गर्छु । मैले व्यवस्थापिका–संसद्मा सहमतिमा पारित भएको संविधान असहमतिमा संशोधन गर्नुहुँदैन भनेर पटक–पटक भन्दै आएको छु । सबै सांसद्ले राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा उभिनु पर्छ । उहाँहरुले जुन खबरदारी गर्नुभएको छ, त्यो सही छ । हामी सांसद्ले पनि हाम्रो कर्तब्य पूरा गर्नुपर्छ । हामी त्यसमा लाग्छौँ ।
पहाडाबाट तराई अलग गरेर हामी हाम्रो स्वाभिमानलाई झुक्न दिदैँनौँ । अहिले जुन ढंगले पहाडबाट तराई अलग गर्नुपर्छ भन्ने अतिवादी सोच बाहिर आएको छ, त्यो राष्ट्रहितमा छैन । ७० वर्षदेखि जनताले गरेको अपेक्षा संविधान जारी गरेर हामीले पूरा गरेका छौँ । १२ वर्षे सशस्त्र युद्धलाई हामीले सहमतिमै अन्त्य गर्न सफल भयौँ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि सहमतिमा गर्नुपर्छ । कसैले पनि अतिवादी कुरा गर्नु हुँदैन । संविधान गीता वा धर्मशास्त्र होइन, यो संशोधनीय छ । त्यसैले पहिला निर्वाचनमा जाऔँ । अहिले आफ्नो पक्षमा संशोधन गर्ने मत पु¥याएर संशोधन गरौँ । अहिले निर्वाचनमा जाने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा पहिलो हो । जुन ढंगले विद्यार्थी युवाले यसरी दबाब दिएर मोबाइल सन्देश पठाउनुभएको छ । म यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छु ।
डा. वंशिधर मिश्र
म अहिले रौतहटमा छु । एक जना पुराना कमरेडको मुत्युपछि म दाहसंस्कार कार्यक्रममा छु । विद्यार्थी युवाले पठाएको मोबाइल सन्देश मैले प्राप्त गरेँ । उहाँहरुले यसरी दिएको दबाब ठीक छ । हामीले राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ । यसले सहमति विपरीत ल्याएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्न दबाब मिल्ने मैले अपेक्षा गरेको छु । उहाँहरुले गरेको प्रयासको म प्रशंसा गर्छु ।
सांसद्, नेकपा (माओवादी–केन्द्र)
‘माननीय होसियार, जनताको अपेक्षा छ राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधेयक खारेज होस्’ भनी मोबाइलमा सन्देश लेखेर पठाएको कुराको म स्वागत गर्छु । उहाँहरुले जे गर्नुभएको छ, त्यो स्वागतयोग्य काम हो । जनताको पक्षमा सांसद्हरुलाई काम गर्न उहाँहरुले झक्झक्याउनुभएको छ । उहाँहरुको दबाबले सकारात्मक सन्देश दिने मैले अपेक्षा गरेको छु । जनहित विपरीत आएको यो संशोधन प्रस्ताव जसरी पनि खारेज हुनुपर्छ र हुन्छ पनि ।
प्रजातन्त्रमा आफ्नो भनाइ राख्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । युवा–विद्यार्थी तुलनात्मक रुपमा अलिक परिवर्तनकामी नै हुने भएकाले उनीहरुले यस्ता दबाबका कुराहरु छिट्टै दिने गर्छन् । त्यसैले उनीहरुले गरेको यो दबाबलाई ठूलो रुपमा लिनु हुँदैन ।
जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणाको सन्दर्भ छ । हामी पनि संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा छौँ । जसको लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो, उनीहरुले नै विरोध गरेका छन् । प्रदेश नम्बर पाँचमा विरोध छ । एमाले विरोधमा छ । त्यसैले राप्रपा यो प्रस्तावले औचित्य गुमाएको छ भन्ने ठहरमा छ । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ र सबै पक्षलाई समेटेर सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्ने राप्रपाको अडान छ । केही बुँदा राष्ट्रहित विपरीत छन् । ती बुँदामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हामी सरकारमा छौँ । सरकारमा हुँदाहुँदै पनि प्रस्ताव ल्याउने बेलामा हामीलाई सोधपुछ नै भएन । प्रक्रियामा संलग्न गराउने काम भएन । त्यसैले हामीले विरोध गरेका छौँ, विरोध गर्छौं ।